Macluumaad ku saabsan cudurka Coronavirus oo ku bixi doonaa 12 luqadood ayaa la soo dhigayaa bog cusub oo internetka ah (website). - Corona Denmark
Macluumaad ku saabsan cudurka Coronavirus oo ku bixi doonaa 12 luqadood ayaa la soo dhigayaa bog cusub oo internetka ah (website).
Comments Off on Macluumaad ku saabsan cudurka Coronavirus oo ku bixi doonaa 12 luqadood ayaa la soo dhigayaa bog cusub oo internetka ah (website).
Boggan cusub iyo khadka teleefanka ahba waxaad ka heli kartaa jawaabaha su’aalaha la xiriira cudurka Coronavirus oo luqaddaada ah. khadka telefoonka hotline-ka ah iyo qoraalka (chatting) waxaa ka jawaabaya shaqaalaheena oo ku hadla 12 luqadood. Waxaad la hadli kartaa ama u soo qori kartaa qof ku hadla luqadaada maalin walba Inta u dhexaysa 17:00 duhurnimo iyo 19:00 galabnimo. Shaqaalaheenu waxay hayaan xogihii ugu dambeeyey ee laanta caafimaadka (Sunhedsstyrelsen) ee la xiriirta cudurka Corona ee Denmark sidaas darteedna waxay ka jawaabi karaan inta badan su’aalaha dadku soo waydiiyaan.
Waqtiyada ka baxsan saacadaha 17-19 waxaad fariin ku dhaafi kartaa meesha wadasheekaysiga, ka dib qof shaqaale ah ayaa kuu soo jawaabaya, ugu danbayn maalinta xigta inta u dhaxaysa saacadaha 17-19. Hoombayjkan waxaad sidoo kale ka heli kartaa, halka aad kala socon karto warbixinada dheeraadka ah ee ku saabsan xaalada koroonaha ee Deenmaark.
Hoombayjkan waxaa maamula hay’adda qoxootiga Deenmaark iyo Als Research. Hoombayjka waxaa maal geliya gudoonka caafimaadka, oo aan wadashaqayno. Waxaan wadashaqayn la leenahay mas’uuliyiinta dawlada Deenmaark, si aanu u hubsano in warbixinada halkan lagu soo gudbinayo ay saxan yihiin, islamarkaana ay cusub yihiin.